समयले सच्याउन नसकेको गल्ती - कोसेली - कान्तिपुर समाचार
समयले सच्याउन नसकेको गल्ती
फाल्गुन १२, २०७४ ईश्वर बुढाथोकी
काठमाडौँ — सायद पत्याइनसक्नुको शक्ति बोकेर हिँड्ने समयले पनि कहिलेकाहीं गल्ती गर्छ । नत्र त कोहीकोही विचित्र मानिस समयभन्दा अघि जन्मिने र बेलै नभई मर्ने थिएनन् । उर्दू साहित्यका अग्रणी एवम् प्रसिद्ध लेखक, कथाकार सआदत हसन मन्टो एक त्यस्तै प्रतिभा थिए जसलाई जन्माउन समयले निकै हतार गरेको थियो ।
सआदत हसन मन्टा
जतिबेला मन्टो जन्मिनुपथ्र्यो त्यतिबेला समयले उनलाई अतीत बनाइदिइसकेको थियो । सन् १९१२ मा पन्जाबको लुधियानामा जन्मिएका मन्टोले ४२ वर्षको अल्पायुमा जे जति लेखे ती तत्कालीन समाजका लागि धृष्टता या दुस्साहस बाहेक केही थिएनन् । मानौं, उनले त्यो समयमा ऐनाको आविष्कार गरे जतिखेरका धेरैजसो मानिसहरू कि त कुरूप थिए कि आँखै देख्दैनथे ।
मन्टो समयले सच्याउन नसकेको गल्ती नै थिए । हुन सक्छ त्यसैले पनि उनी जीवन र साहित्य दुवैमा हदैसम्म बदनाम भए । इज्जत र उनीबीच कोसौंको दूरी थियो । बिचरा रक्सी पिउन नपाए बिरामीझैं देखिन्थे । रक्सी उनलाई कतिसम्म मीठो चीज थियो भने जीवनको अन्तिम क्षणमा पनि उनले पानीको सट्टामा एक पेग ह्विस्की मागेका थिए । मन्टो आफ्नो जन्म, विवाह र लेखक बन्नुलाई जिन्दगीका तीन दुर्घटना मान्थे र जीवनलाई लापरबाहीपूर्ण तरिकाले बेफिक्रीका साथ जिउँथे । समाज एकातिर हुन्थ्यो उनी अर्कैतिर हुन्थे । समाजले जहिल्यै लुकाएर राख्ने यौनजस्तो विषयमा उनी खुलेर चर्चा गर्थे तर दिमागमा कहिल्यै बोकेर हिँड्थेनन् । सरदार जाफरी, कृस्नचन्दर, इस्मत चुगताई, उपेन्द्रनाथ अश्क, फैज अहमद, चर्चित अभिनेता अशोक कुमारजस्ता साथीहरूको सामीप्यमा रहे पनि मन्टोको दुनियाँ नितान्त अलग्गै थियो ।
मन्टोले कथासँगै नाटक, निबन्ध र व्यक्तिचित्र लेखे । अनुवाद र पत्रकारिता पनि गरे । उनी एकदमै जिद्दी र दम्भी लेखक थिए । उनको कलमको कुनै सीमा थिएन । उनी यस्तो लेख्न होला या नहोला भन्ने नै सोच्थेनन् । जस्तो लेख्थे, त्यही रूपमै प्रकाशन र प्रसारण गराउँथे । मन्टो अल इन्डिया रेडियोमा जागिरे छँदा एक पटक उनले लेखेको एउटा नाटकलाई काटछाँट गरेर मात्र प्रसारण गर्न खोजिएको थियो । यत्तिको निहुँमा उनले रेडियोको जागिरै छोडिदिए । मन्टोले केही फिल्मका लागि कथा र पटकथा पनि लेखे । फिल्म ‘आठ दिन’ मा त एक पागल सैनिक अफिसरको छोटो भूमिकामा अभिनय पनि गरे । संयोग पनि कस्तो भने उनै मन्टोले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा दुई पटक बहुलाएर पागलखानामा उपचार गराउन पर्‍यो । आमाको असामयिक मृत्यु हुँदा परेको आघातले महिनौं विक्षिप्त भएका मन्टो आफ्नो नवजात छोरा वफातको मृत्युपछि त बेहोसीमै रहन थालेका थिए । दिमागी तार चुँडिनै लाग्दा पनि लेख्न भने नछाडेका मन्टोका बारे गुजरातीका लेखक विनोद भट्टले लेखेका छन्, ‘मन्टोको जिन्दगीमा होसको समय एकदम कम थियो । मन्टो बेहोसीमै पनि पूरा होसमा हुन्थे ।’
बालखैदेखि मन्टो पिताको छत्रछायाबाट वञ्चित थिए । तीन जना सौतेनी दाजुभाइ थिए जो विदेशमै पढे–लेखेर स्थापित भएका थिए । विदेशबाट दाजुले पठाइदिएको खर्चबाट मन्टोका आमा छोराले निकै दिन गुजारा गरेका थिए । मन्टो पढाइमा भने असाध्यै लद्दु थिए । उनका साथी सुप्रसिद्ध कवि फैज अहमद फैजले एमए उत्तीर्ण गरेर अमृतसर कलेजमा पढाउन थाल्दा उनीचाहिं म्याट्रिकमै अल्झिरहेका थिए । उर्दूका यी महान् कथाकार म्याट्रिकमा उर्दूमै फेल भएका थिए । म्याट्रिकमा हयाट्रिक गरेपछि बल्ल उत्तीर्ण भएका मन्टो उच्च शिक्षाका लागि अलिगढ विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका थिए । तर क्षयरोग लागेको निहँुमा कलेजले निकालिदियो । पढाइमा कमजोर र कलेजबाट निष्कासित उनै मन्टोका किताबमाथि आज पीएचडीको थेसिस लेखिएको छ । गुजरातको सौरास्ट विश्वविद्यालयले मन्टोका कथाहरूलाई पाठयक्रममा राखेको छ । उनको जीवनीमाथि नै फिल्म बन्दै छ ।
मन्टो जहाँ हुन्थे त्यहाँ लफडा पनि हुन्थ्यो । उनी नियतिले अमिलो दिए त्यसकै अचार बनाएर स्वाद लिने खालका थिए । उनी आफ्ना लेखक साथी उपेन्द्रनाथ अश्कलाई उडाउँदै भन्थे, ‘अश्क एकदम मख्खीचुस छ । उसले एउटा बिरालो पालेको छ जसलाई साँझबिहान यताउति यत्तिकै खुला छोडिदिन्छ जब बिरालो बाहिरबाट दूध पिएर आउँछ तब ऊ बिरालोलाई भुइँमा सुताएर सबै दूध निकाल्छ र त्यसैले चिया बनाएर पिउँछ । यो कुरा मैले कसैसँग सुनेको होइन । आफ्नै आँखाले देखेको हुँ र म आफूले पनि त्यो चिया पिइसकेको छु ।’ अश्कसित पछि उनको खटपट पनि पर्‍यो । उनीहरूबीच प्रेमघृणाको सम्बन्ध थियो । अश्कले ‘मन्टो मेरा दोस्त : मेरा दुश्मन’ पुस्तक नै लेखे ।
मन्टोको कथा ‘बू’ माथि जब मुद्दा चल्यो तब एक लेखकले उनलाई भनेछन्, ‘तपाईंको कथा बूको दुर्गन्ध टाढाटाढासम्म फैलियो भनेर गुनासो आएछ नि ।’ मन्टो के कम थिए र हाँस्दै जवाफ दिइहालेछन्, ‘केही छैन म एउटा कथा फिनाइल लेखेर त्यो गुनासोलाई ठीक गर्दिउँला ।’ अर्को एउटा कटाक्ष किस्सा यस्तो छ, एक पटक सीआईडीका एक अधिकारी मन्टोको घर पुगे । मन्टोलाई लाग्यो लाहोरबाट गिरफ्तारीको वारेन्ट लिएर प्रहरी आयो । मन्टोले ती अधिकारीलाई सोधे, ‘भन्नोस् अब मेरो कुन कथाले सास्ती दियो ?’ ती अधिकारीले भने, ‘म यहाँ यो कुराको जाँच गर्न आएको हुँ तपार्इंको नाम कम्युनिस्ट पार्टीको रजिस्टरमा लेखिएको छ, भन्नुस् त त्यससँग तपाईंको के सम्बन्ध छ ?’ मन्टोले सोधे, ‘रजिस्टरसित कि कम्युनिस्टसित ?’ दाहोरो संवादमा ती अधिकारीको केही लागेन र उक्त प्रकरण त्यहीं रोकियो ।
‘ठन्डा गोस्त’ कथामाथि मुद्दा चलिरहेका बेला एक पटक मन्टो आफ्नो साथी नसिरसित ट्रेन चढेका थिए । उनीहरूसित बियरको बोतल पनि थियो । रेलको जुन डिब्बामा उनी बसेका थिए । त्यही डिब्बामा एक मौलवी हातमा माला जपेर बसिहेका थिए । मन्टोले त्यी मौलवीलाई भगाउन आफ्नो साथीलाई भने, ‘बियरको बोतल निकाल ।’ तुरुन्तै नसिरले सिट मुन्तिरबाट सिसी निकालेर मन्टोलाई दिए । केहीक्षणमै मौलवी अर्को स्टेसनमै झरे । त्यहीं अर्का एक सज्जन मानिस आफ्नी श्रीमतीसित बसिरहेका थिए । मन्टोले ती सज्जनलाई भने, ‘हेर्नोस्, हामी त पर्‍यौं जँड्याहा । हामीसँग बियरको बोतल पनि छ । यसलाई पिएपछि हामी अन्टसन्ट बक्न थाल्छौं । तपाईं सज्जन हुनुहुन्छ । फेरि श्रीमती पनि साथै हुनुहुन्छ । त्यसैले अर्को डिब्बामा गएर आरामले बस्नोस् ।’ ती सज्जन बाहिर गए र स्टेसन म्यानेजर जो मन्टोका पुराना सहपाठी पनि थिए, उनलाई भने डिब्बामा दुई जना बदमास बसेका छन् । म्यानेजरले भने अहँ त्यो डिब्बामा सआदत हसन मन्टो बसेका छन् जो अत्यन्तै सज्जन छन् । तर ती यात्रीले पत्याएनन् र श्रीमतीलाई लिएर अर्कै डिब्बामा बस्न गए ।
मन्टोले एक पटक रक्सी छाडे । तर केही समयपछि त्यो रक्सीले छोडेजस्तो सावित भयो । मन्टोले रक्सी छोड्न सकेनन् । एक जना मित्रले भने ‘तपाईंले रक्सी छोडे भन्दा म निकै खुसी थिएँ तर अहिले फेरि पिउन थाल्नुभएछ । मलाई दु:ख लागेको छ ।’ परिहासमा उत्तिकै सिपालु मन्टोले भनेछन्, ‘तपाईंले सत्य भन्नुभयो अहिले फरक के छ भने त्यतिबेला तपाईं खुसी हुनुहुन्थ्यो । आज म खुसी छु ।’
मन्टोका पाँच कथामाथि अदालतमा मुद्दा चले । तीनवटा भारतमा र दुईवटा पाकिस्तानमा । ती कथाहरू क्रमश: ‘काली सलवार’, ‘धूवाँ’, ‘बू’, ‘ठन्डा गोस्त’, र ‘उपर, निचे और दरमियान’ हुन् । सन् १९४५ ताका पन्जाबको ‘खैयाम’ पत्रिकामा मन्टोको ‘बू’ कथा छापियो । छापिनेबित्तिकै यस कथाको खुब आलोचना भयो । पन्जाब सरकारले कथा छापिएको पत्रिकै जफत गर्‍यो । कथा ‘बू’ माथिको मुुद्दामा राजेन्द्रसिंह वेदी, कन्हैयालाल कपुर, खान बहादुर, अब्दुल रहमानलगायतका उर्दूका विशिष्ट लेखकहरूले कथा अश्लील नभएको, यसलाई पढेर पाठकमा खराब विचार नआउने भन्दै मन्टो पक्षमा बयान दिए । यो मुद्दा मन्टोले जिते ।
‘ठन्डा गोस्त’ छाप्ने पत्रिकाले जरिवाना तिर्नु मात्र परेन यसले निकै हलचलै मच्चायो । अदालतमा यस कथाका पक्ष र विपक्षमा अनेकन दलिलहरू प्रस्तुत भए । लाहोरका मनोविज्ञान विभागका वरिष्ठ प्राध्यापक डा. लतिफले मन्टोको उक्त कथाको विरोधमा भनेका थिए, ‘मैले ठन्डा गोस्त कथा भर्खर पढें । यो गलत ठाउँमा छापिएको छ । मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भने यो कथा कुनै साइन्टिफिक म्यागजिनको केस हिस्ट्रीका लागि पुरुषत्व र नामर्दीको पक्षमा या विरोधमा छापिएको भए त्यसमा अश्लीलताको आरोप लाग्ने थिएन । जुन शब्दको प्रयोग त्यहाँ भएको छ । त्यो निकै घिनलाग्दो छ । ती शब्दको महत्त्व केस हिस्ट्रीमा धेरै हुन्छ ।’ यस मुद्दामा मन्टो पक्षमा चार वकिलले बहस गरेका थिए । अन्तत: अदालतले तीन महिनाको जेल सजाय र तीन सय रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनायो । तल्लो अदालतको फैसलाको विरुद्धमा मन्टो माथिल्लो अदालतमा अपिल गर्न पुगे र छुटे ।
मन्टोको अर्को कथा ‘उपर, निचे और दरमियान’ लाई लिएर लाहोरको अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो । अदालतमा मन्टो ढिलो गरी पुगेपछि न्यायाधीशले सोधे, ‘किन ढिलो गरी आउनुभयो ?’ मन्टो भन्छन्, ‘योर अनर, म बिरामी छु ।’ त्यसो भए डाक्टरको पुर्जी पठाइदिएको भए हुन्थो त ? मन्टोले भने, ‘म यत्ति बिरामी थिएँ कि मेडिकल रिपोर्ट पठाउने कुरा पनि सोच्नै सकिनँ ।’ न्यायाधीशले मन्टोलाई ‘तपार्इं के चाहनुहुन्छ’ भनेर सोध्दा मन्टोले आफूले छुट्कारा चाहेको बताए । न्यायाधीशले कथा पढेरमा फैसला सुनाउने कुरा गरे । भालिपल्ट मन्टो अदालतमा हाजिर भए । न्यायाधीशले मैले फैसला लेखें भन्दै गोजीबाट एक कागत झिकेर सहयोगीलाई सोधे, ‘आज कति तारिख हो ?’ सहयोगीले पच्चीस के भनेका थिए । कानको एन्टेनाले त्यति काम नगरिरहेका मन्टोले पच्चीस रुपैयाँ जरिवाना गरेको ठानेर फयाट्ट भने, ‘योर अनर, पच्चीस रुपैयाँ जरिवाना !’ यति थोरै रकमको जरिवाना होला भनेर मन्टोले कल्पनै गरेका थिएनन् । खासमा न्यायाधीशले ५०० रुपैयाँ जरिवाना गरेका थिए । तर मन्टोको कुरा सुनेपछि उनले ५०० को पछाडिको दुइटा शून्यलाई मेटेर ५ को अघि २ थपिदिए । मन्टोले झमेला सस्तोमै टर्‍यो भन्ने ठाने ।
ती न्यायाधीश थिए मेहेन्दी अली सिद्की जो मन्टोका कथाका प्रशंसक थिए । उनले मन्टोलाई बेग्लै भेटेर कुराकानी गरेका थिए । भेटमा मन्टोले मेरो प्रशंसक थियौ भने मलाई किन जरिवाना गर्‍यौ भनेर सोध्दा न्यायाधीशले यसको जवाफ म एक वर्षपछि दिन्छु भनेका थिए तर त्यसको वर्षदिन पूरा नहुँदै मन्टोको देहान्त भयो । न्यायाधीशले ‘मन्टो मेरो अदालतमा’ शीर्षकको लेख लेखे र मन्टोसित गरेको वाचा पूरा गर्न नसकेकोमा ग्लानि व्यक्त गरे ।
सन् १९४८ मा हिन्दुस्तान भारत र पाकिस्तानमा विभाजित हुँदा मन्टोले पाकिस्तान राजेका थिए । भनिन्छ, यसैबेलादेखि मन्टो पनि दुई भागमा बाँडिएँ । सआदत हसन पाकिस्तान गए भने मन्टो भारतमै बसे । सन् १९५५ मा मन्टो सधैंका लागि धरतीमा मिसिन गए । १९३५ मा ‘आतिशपारे’ कथासङ्ग्रहसहित राजकमल पाकेट बुक्सबाट ‘दस्ताबेज’ शीर्षकमा मन्टोका सम्पूर्ण रचना पाँच खण्डमा प्रकाशित छ । मन्टोले समाज बिगार्ने वा चर्चा पाउनका लागि भनेर लेखेका थिएनन् । यदि आज उनी हुँदा हुन् त उनी लेखेरै सेलिब्रेटी हुन्थे होलान् ।
(विनोद भट्टकृत ‘मन्टो एक बदनाम लेखक’ र मन्टोको संस्मरणात्मक ‘मीनाबजार’ लगायत कृतिका आधारमा)
प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७४ ०९:०९
महान् तर बदनाम नाम
आफ्नै एक प्रशंसकसितको अवैध सम्बन्धले जन्मिएको बच्चालाई वर्षौंपछि स्वीकारेर पितृत्व प्रदान गर्ने दाजाई जीवनमा के चाहन्थे ? त्यो उनी पनि जान्दैनथे ।
चैत्र २६, २०७३ ईश्वर बुढाथोकी
जर्मनको एउटा प्रसिद्ध उखानले भन्छ, ‘बेवकुफ र समझदारले कसैको पनि नोक्सान गर्दैनन् मात्र केही पागल र बुद्धिमान खतरनाक हुन्छन् ।’
यद्यपि पागलपन र बुद्धिको ‘फ्युजन’ यदि एउटै व्यक्तिमा भयो भनेचाहिँ त्यो व्यक्ति झन् कस्तो होला त ? त्यसैको एउटा गजबका उदाहरण हुन् जापानका प्रख्यात लेखक ओसामु दाजाई । जसको विचित्रको पागलपन र लेखन प्रतिभाबारे पढेर अहिले पनि मानिसहरू दाँतका मुनि जिब्रोलाई अठ्याउँछन् ।
कलात्मक लेखनशैली, अद्भूत कल्पनाशीलता, प्रेम सम्बन्ध, आवारापन, सनक, दुव्यर्सन र पटक–पटक गरेको असफल आत्महत्याको प्रयासले विश्व चर्चित दाजाईमा पागलपन र बौद्धिक प्रतिभाको अनौठो मेल थियो । जसले दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछिको जापानी साहित्यिक परिवेशलाई कब्जामा लिएर आधुनिक विश्व साहित्यलाई विशिष्ट र सुन्दर गद्य रचनाहरू दिएका थिए ।
आख्यानात्मक साहित्यलाई बेजोड र मर्मभेदी बनाएर त्यसमा आत्मीय भाषाशैलीलाई उपस्थित गराई सुरुमै संवेदनशील पाठकलाई हिरासतमा लिने र उल्टै उनीहरूबाट सहानुभूति पनि बटुल्ने अपारको बौद्धिक खुबी थियो दाजाईमा । पारिवारिक पृष्ठभूमि सम्भ्रान्त र सामन्ती प्रकारको भए पनि उनी स्वभावले निकै भावुक प्रकृतिका थिए । जमिनदारी प्रथाको आलोचना गर्थे तर पागलपनजस्तो अनौठो आनीबानीका कारण उनी बदनाम पनि थिए । रक्सी उनी उधुम पिउँथे र बारम्बार वेश्यालय गइरहन्थे । उनको जीवनशैली अत्यन्तै अव्यवस्थित र अपरम्परागत थियो । उनी जिन्दगी निस्फिक्री तरिकाले जिउँथे । रक्सी, अफिम उनको शरीरको इन्धन थियो । नारीदेहको सामीप्यता र गन्ध उनका लागि औधीप्रिय थियो ।
आफ्नै एक प्रशंसकसितको अवैध सम्बन्धले जन्मिएको बच्चालाई वर्षांैपछि स्वीकारेर पितृत्व प्रदान गर्ने दाजाई जीवनमा के चाहन्थे ? त्यो उनी पनि जान्दैनथे । उनी त बस् यत्ति मात्र जान्दथे कि उनले जे चाहेका थिए त्यो यो दुनियाँमा छैन ।
संसारमा सूर्योदयको देश भनेर चिनिने जापानका बीसौं शताब्दीका यी अग्रणी एवं सौर्यलेखक ३८ वर्षे अल्पायुमै अस्ताएको झन्डै सत्तरी वर्ष हुन लागिसकेको छ । टोकियोको मिताकास्थित जेनरिन परिसरको एक समाधिमा चिरनिन्द्रामा रहेका दाजाईको जन्मजयन्ती जापानमा हरेक वर्ष उत्सवका साथ मनाइन्छ । त्यस क्रममा रक्सीका महापारखी दाजाईको समाधिमा उनका प्रशंसकहरू थुप्रै बियरका सीसी र डब्बा राखिदिने गर्छन् ।
उत्तरी जापानको आओमारी प्रान्तस्थित एक जमिदारको घरमा दाजाईको जन्म सन् १९०९ को जुन १९ मा भएको थियो । जापनको सुदूरकुनामा अवस्थित आओमारी प्रान्तमा रहेको अर्धपश्चिमी शैलीको चार मिटर उचाइको पर्खालले घेरिएको आलिसान महलमा जन्मिएका एघार बच्चाबच्चीमध्येका एक थिए, ‘सुसिमा सुजी’ अर्थात् ओसामु दाजाई । आमाको स्वास्थ्य कमजोर भएका कारण उनको रेखदेखका लागि एउटी सुसारे राखिएकी थिई । जमिनदार बुबा राजनीति पनि गर्ने हुादा प्राय: परिवारबाट टाढै हुन्थे । दाजाईको स्याहारसुसार गर्ने सुसारेले बीचमै छाडेपछि उनको हेरचाह काकीले गरेकी थिइन् । आमाको अगाध र बिनाशर्तको माया उनले पाएनन् । सात वर्षको उमेरमा उनी काकीको घरबाट आफ्नै घर फर्के र स्कुल जान थाले । उनको औपचारिक अध्ययनको सुरुवात कानागी लोअर प्राथमिक स्कुलबाट भयो । सन् १९२२ मा उनी मिजी उच्चप्राथमिक स्कुलमा पढ्दै गर्दा इन्फ्लुएन्जाको कारण उनको पिताको मृत्यु भयो । कलिलै उमेरमा बाबुको अभिभावकत्व गुमाएका दाजाईले माध्यमिक शिक्षाको पढाइ आओमारीको प्रिफेक्चुरल हाइस्कुलबाट पूरा गरेका थिए ।
सन् १९२७ मा दाजाई हिरोसाकी महाविद्यालयमा स्नातक तहमा भर्ना भए । त्यहााका अब्बल विद्यार्थीमध्येका एक उनीसित लेखक बन्नलाई सपना बाहेक अरू केही थिएन । स्थानीय साहित्यिक पत्रिकामा उनका रचनाहरू छापिन थालेका थिए । त्यसै वर्ष उनका प्रिय लेखक रयुनोसुकी आकुतागावाले आत्महत्या गरे । आकुतागावाको मृत्युले विक्षिप्त भएका दाजाई पढाइलाई उपेक्षा गरेर केही समय प्रतिबन्धित कम्युनिस्ट राजनीतितिर लागे । गैरकानुनी क्रियाकलापमा भाग लिएको भनेर तत्कालीन सरकारले उनलाई गिरफ्तार गर्‍यो र केही समयमै छाडिदियो ।
आबारापन र लापरबाहीका कारण दाजाई एक पटक घरपरिवारबाट निष्कासित भए । एकै रातमा निर्धन भएर सडकमा भौंतारिन पुगे । उनले धेरैसाग मद्दतको भीख मागेर फुनावासीमा एउटा सानो घर भाडामा लिएर बसे । त्यहाा उनी गम्भीर बिरामी भए । बगैंचाको एकातिरको कुनामा रहेको कपली रूखमा फुलेको फूल हेरेर उनी आफूलाई सम्हाल्थे । नितान्त एक्लै सुस्ताइरहेका दाजाईको उदास मनलाई त्यो फूलले शीतलता मात्र दिएको थिएन लेख्ने ऊर्जा पनि दिएको थियो । त्यहाँबाट केही दिनमै उनी घर फर्किए र सन् १९२९ को १० मेमा स्नातक अन्तिम वर्षको परीक्षाको अघिल्लो रात उनले ‘क्यालमोटिन’ नामक निद्राको औषधि अत्यधिक मात्रामा सेवन गरे । बिहान उठ्दा उनी कोमामा गइसकेका थिए । उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरियो । केही दिनको उपचारपछि उनी कोमाबाट बाहिर आए ।
सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि सन् १९३० मा उनी टोकियो विश्वविद्यालयको इम्पेरियल फ्रेन्च साहित्य विभागमा भर्ती भए । पढाइमा उनको ध्यान कमै जान्थ्यो । त्यसैताका ओयामोर ह्यात्सोयो नामकी युवतीसित उनले भागेर बिहे गरे । परिवारले उनको यस कदमलाई स्वीकारेन । औपचारिक रूपमै उनी फेरि घरबाट निकालिए । करिब नौ दिनपछि उनी पुन: घर फर्किए र त्यसको केही समयमै दाजाईले अर्की प्रेमिका तानावी सिमीकोसँगै कामाकुराको समुद्री तटमा फालहाले । सिमीकोको ज्यान त गयो तर दाजाईलाई भने एउटा माझीले बचाइदियो । त्यसको महिना दिनपछि बिरामी अवस्थामै उनले ओयामा नाम गरेकी युवतीसित दोस्रो बिहे गरे । सन् १९३५ मा उनले एक अखबारमा काम गर्नका लागि परीक्षण परीक्षा दिए । त्यसमा असफल भए । त्यति नै बेला कलेजमा शुल्क बुझाउन नसकेको तनावमा उनले फेरि झुन्डिएर मर्न खोजेतर सकेनन् ।
त्यसपछिका केही दिन उनी गायब भए । परिवारले प्रहरीलाई खोजिदिन अनुरोध गरेको पनि थियो, दाजाई घर फर्किए । समयमै शुल्क नबुझाएकाले टोकियो विश्वविद्यालयले उनलाई निष्कासन गर्‍यो । त्यो वर्ष उपचारका लागि दाजाई एउटा मानसिक अस्पतालमा एक महिनाभन्दा बढी बसे । त्यसैबीच उनले आफ्नी पत्नी र उसका साथी जेन्सिरो कोदाताबीच नाजायज सम्बन्ध भएको थाहा पाए । एक रात फेरि उनले आफ्नी पत्नीलाई अत्यधिक मात्रामा निद्रा लाग्ने औषधि खुवाए र आफूले पनि खाए तर दुवैको मृत्यु भएन । दाजाईले पत्नीसित सम्बन्धविच्छेद नै नगरी एक मिडिल स्कुलकी शिक्षिकासाग तेस्रो बिहे गरे ।
सन् १९४५ मा उनले उपन्यास ‘सुगारू’ लेख्दै थिए । त्यतिबेला उनी छातीको समस्याले बिरामी परे । जापानले प्रशान्त युद्धमा प्रवेश गरेको थियो । टोकियोको विरुद्धमा भएको अमेरिकी हवाई हमलामा उनी बसेको घर जल्यो । उनी आफ्नो मूलघरनजिक बस्न थाले जुन घर दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेचिएको थियो । त्यही घरमा उनले २२ वटा साहित्यिककृति लेखे ।
संसारको आधा भागलाई रगतले भिजाएर दोस्रो विश्वयुद्ध थामियो । युद्धपश्चात् दाजाईको लोकप्रियता एकातिर उकालो लाग्दै थियो भने अर्कोतिर रक्सी, चुरोट, नशालु पदार्थ आदिको अत्यधिक सेवनले उनको स्वास्थ्यस्थिति ओरालो लाग्दै थियो । दाजाई एक ब्युटिसियन तोम्ले यामाजाकी नाम गरेकी विधवाको सम्पर्कमा आए जसले बिहे गरेको १० दिनमै युद्धमा लोग्नेलाई गुमाएकी थिइन् । दाजाई श्रीमती र बच्चाबच्चीलाई छाडेर तोम्लेसितै बस्न थाले । त्यसबेला दाजाई उपन्यास ‘नो लङ्गर ह्युमन’ पूरा गरेर अर्को उपन्यास ‘गुडबाई’ लेखिरहेका थिए । त्यसै क्रममा जुन १३, १९४८ मा दाजाई र तोम्ले दुवैले तौजा गावा नहरमा डुबेर ज्यान फाले । यस्तो लाग्छ, यसपूर्वका पटक–पटकका उनका आत्महत्याका प्रयासलाई सायद भावीको विधानले नै उनले लेख्न बाँकी रचनाका लागि असफल तुल्याइरहेको थियो । तर, दुर्भाग्य । उनको आत्महत्याको यही अर्को एक प्रयास अन्तिम बन्न पुग्यो । यसरी विश्वमा सूर्योदयको देश भनेर चिनिने जापानका सौर्यलेखक दाजाई सधंैका लागि अस्ताए ।
मर्नुअघि उनले आफ्ना समस्त रचना दुनियाँलाई दिए । लेख्नकै लागि जन्मिएका दाजाईको आत्महत्या जुन दिन सफल भयो त्यही दिन उनीभित्रको लेखकको औचित्य समाप्त भइसकेको थियो । त्यसपटक पनि मृत्युले नमारेको भए सायद उनलाई जिन्दगीले नै मारिदिन्थ्यो होला । उनले आफूले लेखिरहेको ‘गुडबाई’ उपन्यासलाई पूरा नगरिकन आत्महत्या गरे । तर, तेस्रो आँखा उघारेर हेर्न सके प्रस्ट देखिएला कतै उनले आत्महत्या गरेर नै त्यस उपन्यासलाई पूरा गरिदिएका पो हुन् कि । उपन्यासको आखिरी अध्याय दाजाईको आत्महत्या पनि त हुन सक्छ ।
दाजाईका प्रवृत्ति र अमर कृति
दाजाईले सन् १९३३ देखि निरन्तर लेखेका थिए । १५ वर्षको सक्रिय लेखन अवधिमा उनले करिब दुई दर्जन जति पुस्तक लेखे । उनी उपन्यास, कथा र निबन्धमा समर्पित थिए । लेखनमा आत्मपरक वर्णन शैलीले नै उनलाई माथि उठायो । पहिलो कथा सङ्ग्रह ‘ब्यानेन’ को प्रकाशनपछि उनको लेखन झन् तीव्र भयो । अर्को ‘ओमोइड’ निकै लोकप्रिय रह्यो । निजात्मक शैलीमा निजी अनुभूति, अनुभव तथा घटनाहरूलाई कथाको आकार दिनमा उनी अत्यन्तै सिद्धहस्त थिए । आफ्ना बाल्यकाल तथा किशोरावस्थाका चाहना, दु:ख, पारिवारिक भाइचाराका सम्बन्ध, मायाको अतृप्तिजस्ता अनुभूतिहरू लेखनका लागि उनका खुराक थिए ।
विश्वयुद्धको बादल मडारिइरहेको असहज र प्रतिकूल वातावरणमा पनि उनले सहज रूपमा निकै कलात्मक शैलीद्वारा राम्रा उपन्यास र कथाहरूको रचना गरे । जापानका १९६८ का नोबेल पुरस्कार विजेता यासुनारी कावाकाता, मिसिहिमा, युकियो, नातसुमी सेकी, हारुकी मुराकामीजस्ता लेखकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उचाइ हासिल गरेका छन् । दाजाईको लेखकीय उचो कदले भने धेरैलाई फेदमै अल्मल्याउँछ किनभने उनका कतिपय पुस्तकहरू अङ्ग्रेजी अनुवाद हुनै सकेका छ्रैनन् । उनको कलात्मक आत्मपरक शैलीलाई अनुवादमा उतार्नु नै जटिल भएको समीक्षक तथा अनुवादकहरूको भनाइ छ ।
सन् १९४० मा छापिएको मित्रताको अटुट सम्बन्धमाथि लेखिएको दाजाईको ‘मेलोस’ लघु उपन्यास जापानका स्कुल, कलेजहरूमा अझै पनि पाठ्यपुस्तकका रूपमा पढाइन्छ । अर्को दाजाईको पुख्र्यौली थलोको पृष्ठभूमिमा लेखिएको ‘सुगारू’ पनि निकै प्रसिद्ध छ । त्यसमा तनाव, औपचारिकता एवं वास्तविक स्नेहलाई प्रदर्शित गर्दै खराब मौसम र बालीनाली उत्पादनमा भएको ह्रासबाट उत्पन्न समस्याले आक्रान्त भएका त्यहाँका मानिसहरूका कठोर बोली, भद्दा व्यवहार र अशिष्ट आचारणका साथै हास्य प्रसङ्गलाई उनले वास्तविक गहिराइमै पुगेर खिचेकाले धेरैले उनको सराहना गरे । सन् १९३९ मा प्रकाशित उपन्यास ‘जोसितो’ (द स्कुल गर्ल) पनि निकै चर्चित छ । भनिन्छ, त्यसमा एउटी स्कुले छात्राको सम्पूर्ण कथाको परिक्रमा गराउने क्रममा दाजाई अप्रत्यशित रूपमा प्रकट भइदिन्छन् ।
दाजाईले शृङ्खलात्मक अर्को सशक्त उपन्यास ‘नीनजिन सिकाक्कु’ (नो लङ्गर ह्युमन) मा मानवको अस्तित्व पतनको सुन्दरतालाई प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसमा उनको तेजिलो दृष्टिकोण छ । रोमान्टिक कल्पनाले भरिएको उनको ‘ब्लु ब्याम्बो’ लोककथामा आधारित सात कथाको सङ्ग्रह हो । यही कृतिले दाजाईमा भएको अथाह कल्पनाशक्तिको पुष्टि गरेको थियो । उनी आफ्ना कृतिमा काल्पनिक दुनियाँ खडा गरेर मनोवैज्ञानिक चिन्तनलाई मार्मिक रूपमा प्रस्तुत गरेर पाठकलाई सोचमग्न र मर्माहत बनाइदिन्छन् ।
जापानी मूल भाषामा लेखिएको ‘सायो’ (द सेटिङ सन) उपन्यासले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद भएर आएपछि दुनियाँमा तहल्का मच्चायो । निस्सारतावादी यस उपन्यासको चर्चा अझै पनि भइरहेकै छ । नेपालका प्रसिद्ध लेखक शंकर लामिछानेले यसको नेपाली अनुवाद गर्न चाहेका थिए तर पारिजातकृत नेपालको प्रख्यात उपन्यास ‘शिरीषको फूल’ को पाण्डुलिपि पढेपछि त्यसको अनुवादलाई आवश्यक ठानेनन् । ‘शिरीषको फूल’ चर्चित भूमिकामा शङ्कर लामिछानेले लेखका छन्, ‘मैले यस्तै अचम्मित पार्ने एक जापानी उपन्यास पढेको थिएँ, ओसामु दाजाईको द सेटिङ सन । त्यो यति राम्रो लागेको थियो, उल्था गर्ने विचार गरेको थिएँ र सोचेको थिएँ, त्यसले नेपाली साहित्यलाई केही उपलब्धि हुनेछ । अब त्यसको आवश्यकता रहेन ।’
यो उपन्यासले जिन्दगीको तुक खोज्दैन । बरु जिन्दगीे नै कुनै बेबकुफले तुक मिलाएर सुनाएको कथा हो भन्ने आशय राख्छ । जुन कथामा सबै तुकहरू पूर्ण त हुन्छन्, केबल अर्थ हुँदैन । दाजाई चङ्गालाई झैं पाठकलाई उडाएर फेरि बिजुलीको तारमा अड्काइदिने सामथ्र्यका लेखक हुन् । उनी लेखनमा पाठकसँग सीधै सम्पर्क राख्छन् र आफ्नो साहित्यिक शैलीबाट आफ्नै चिन्ता अभिव्यक्त गरिदिन्छन् । अशान्त र अस्थिर मनोदशा भएर पनि निरन्तर लेख्ने दाजाईको मानसिक क्षमता त गजबकै हो ।
उनका प्रमुख कृतिहमा मेमोरिज (१९३३), फ्लावर्स अफबफोनेरी (१९३५), दलेट यर्स (१९३६), द स्कुल गर्ल (१९३९), वन हन्ड्रेड भ्युज अफ माउन्ट फुली (१९३९), मेलोस (१९४०), राइट एन्ड स्माइल (१९४२), सुगारू (१९४४), द सेटिङ सन (१९४७), नो लङ्गर ह्युमन (१९४८), ब्लु ब्याम्बो (१९९३), अ चेरी (१९४७), प्यानडोरा बक्स (१९४४), आई हियर्ड इन दिस वे (१९४७), गुडबाई (१९४८) आदि रहेका छन् ।
पृथक कल्पनाशक्ति, अस्तित्वविहीन जीवनवादी चिन्तन र मृत्योन्मुखी अवस्थाहरूमा पुग्नुको अनुभूतिजन्य परिणतिहरूलाई कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने सिर्जनात्मक प्रतिभाले ओसामु दाजाईलाई विश्वसाहित्यका एक अविस्मरणीय स्रष्टाका रूपमा उभ्याएको छ । दाजाईको चरित्र, आदत र खराब आचरणले उनको चुलिएको उचाइलाई कतैबाट पनि छेक्न सक्दैन । उनी जताबाट हेरे पनि देखिन्छन् । उनको बदनामीलाई पनि आज इज्जतका साथ लिइन्छ ।
(विभिन्न सन्दर्भसामग्रीहरूको सहयोगमा)
प्रकाशित : चैत्र २६, २०७३ १७:०४